बलात्कार आरोपमा म्यादी प्रहरी पक्राउ – Annapurna Post News
May 3, 2022 sujaLeaveaComment on बलात्कार आरोपमा म्यादी प्रहरी पक्राउ
काठमाडौंमा बलात्कार आरोपमा एक म्यादी प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छकागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्ट कृष्ण मन्दिर काँडाघारीमा कार्यरत १८ वर्षीय हिमाल विष्ट बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
कैलाली घर भई काठमाडौं–१६ रानीबारीमा भाडामा बस्ने करिब १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पीडित किशोरीले महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
काठमाडौँ । संसारमा सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण हृ दयघा त हो । हृदयसम्बन्धी रोगले धेरैजनालाई ग्रस्त बनाइरहेको छ। आखिर किन यति धेरै हृदयसम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन् ? किन यो रोग बढ्दो छ ? मूलतः यसका दुई कारण छन्।
एक, अहिलेका मान्छेको खराब खानपान नै यसको कारण हो । खराब खानपानकै कारण मान्छे रोगी भएका छन् । धेरैलाई उच्च रक्तचाप छ, मोटोपन छ, कोलेस्ट्रोलको समस्या छ। यी समस्याहरुले हृदयघातको जोखिम बढाएको छ।दोस्रो कारणचाहिँ हृदयाघातको संकेतबारे मान्छेहरु अनभिज्ञ छन् । यहीकारण उनीहरु समयमै सावधान रहँदैनन् । सामान्यत के मानिन्छ भने छातीमा तीव्र दुखाइ हुनु नै हृदयघातको संकेत हो । यद्यपि यति मात्र हृदयघातको संकेत होइन।
हृदयघात हुनुअघि नै छालामा केही अरु संकेत देखापर्छ, जसलाई पहिचान गरेर हामी सतर्क रहन सक्छौं। मुटुको स्वास्थ्य गडबड भएपछि छालामा अनेक किसिमका संकेत देखिन थाल्छन्। उक्त संकेतलाई पहिचान गरेर बेलामै सतर्क रहेपछि सम्भावित खतराबाट बच्न सकिन्छ।
अचानक छालामा स-सना बिबिरा आउनु:शरीरमा अचानक जुनसुकै भागमा स-सना बिबिरा आउँछ भने यसबाट बुझ्न सकिन्छ तपाईंमा हृदय रोग छ । यस्तो बिबिरा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढेपछि देखिन्छ । त्यसैले अचानक देखिने यस्ता बिबिरापछि केही सावधान भने रहनुपर्छ ।
आँखाको आसपासमा पहेंलो वा सेतो चिप्रा जस्तो देखिनु: दुवै आँखाको छेउँमा सेतो-पहेंलो चिप्रा जस्तो देखिन्छ । कसै कसैमा यो चिप्रा जमेको मैनबत्ती जस्तै पनि देखिन्छ । आँखाका साथै यस्तो चिप्रा हात र खुट्टामा पनि देखापर्न सक्छ । यदि तपाईंमा यस्तो संकेत देखिए तपाईंको कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण भएको छैन । यसले कुनैपनि बेला हृदयघातको जोखिम निम्त्याउँछ ।
छालामा निलो वा बैजनी चिहृन: यदि तपाईंको शरीरको कुनैपनि भागको छालामा नीलो वा बजैनी रंगको देखिन्छ भने सावधान हुनुहोस्, किनभने यो अस्वस्थ्य मुटुको संकेत हो । यस्तो लक्षण धेरैजसो खुट्टाको औंला आसपासमा देखापर्छ । छालामा निलो, बैजनी निशानाको अर्थ हो कि तपाईंको शरीरको कुनै भागमा रगत जमेको छ र पर्याप्त अक्सिजन पुगिरहेको छैन । धमनीमा रगत जम्मा हुँदा धमनी बन्द हुन्छ, जो हृदयघातको कारण बन्न सक्छ ।
नङको भाग सुन्निनु: यदि तपाईंको औंलाको माथिल्लो भाग सुन्निएमा यो पनि हृदयघातको पूर्वसंकेत हुनसक्छ । सामान्यत नङको भाग सुन्निनु भनेको मुटुमा संक्रमण भएको वा अरु रोग भएको संकेत हो । कहिलेकाहीँ फोक्सोको समस्याले पनि यस्तो लक्षण देखाउँछ । यद्यपि यी सबै संकेत हृदघातको कारण बन्न सक्छ ।
नङको बिचमा नीलो वा बैजनी धर्सा: अचानक तपाईंको औंलामुनी निलो वा बैजनी रंगको निशाना देखियो भने सावधान रहनुहोस् । यसले पनि हृदय रोगको संकेत गर्छ । हुन त यस्तो निशान चोटको कारण पनि देखापर्न सक्छ । यद्यपि कुनै चोटपटक लागेको छैन भने तुरुन्तै चिकित्सककहाँ पुग्नुपर्छ ।खुट्टामा स-सना घाउ.यदि तपाईंको हात वा खुट्टाको औंलामा स-सना घाउ खटिरा जस्तो देखिन्छ र यो दुख्ने किसिमको छ भने यसले पनि हृदय रोगको संकेत गर्छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारलाई कान समातेर उठबस गराएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियोसहित)